63 Gabdhood Oo Ka Qalinjabiyay Tababar Kusaabsan Hogaaminta Dugsiyada (School Leadership) - Cakaara News
63 Gabdhood Oo Ka Qalinjabiyay Tababar Kusaabsan Hogaaminta Dugsiyada (School Leadership)
Jigjiga(cakaaranews)Khamiis 25ka May 2017. Macalimiin kakooban 63 gabdhood oo laga soo kala xulay barayaasha dugsiyada deegaanka islamarkaana heerka aqoontoodu isugujirto diploma iyo degree ayaa kadib markii uu u soo dhamaaday tababar ay kuqaadanayeen jaamacad jigjiga mudo 3 bilood ah kuna qotomay nidaamka hogaaminta dugsiyada (school leadersip) ayaa maant si habsami leh xafladii qalinjabintoodu uga dhacday hoolka shirarka ee Nogob Hutel.
Hadaba, xafladan qalinjabinta ah ayaa waxaa furitaankeedi khudbad muhiim ah oo dhinacyo badan taabanaysa kasoojeediyay wasiirka xafiiska waxbarashada DDSI mudane Ibraahim Aadan Mahad oo ugu horayn uhanbalyeeyay dhamaan qalinjabiyayaasha kaqalinjabisay tababarka hogaaminta ee ay kuqaadanyeen jaamacada jigjiga. Wuxuuna intaa kudaray wasiirku in dhamaan qalinjabiyayaashu ay yihiin gabdho macalimiin ahaa islamarkaana laga soo kalxulay dugsiyada deegaanka. iyadoo xubanahan qalinjabiyayn ay baranayeen mudo 3 bilood ah school leadership. Si ay unoqdaan maamulayaasha dugsiyadii ay kakalayimaadeen. Wasiirka oo hadalkiisa siiwata ayaa xusay in qorshayaasha sectorka ee horumarinta waxbarshada ee (ESDP5) uu xooga saaray in dumarku waxbaratay ay hogaaminta dugsiyada deegaanka ay door muhiim ah kaqaataan maamulkiisa iyo hogaamintiisaba.
Wasiirka ayaa tilmaamay in dumarku ay yihiin lafdhabarta qoyska isamarkaana ay door laxaadleh ka galeen horumarka deegaanka.
Dhanka kale, wasiirka ayaa qalinjabiyayaasha kula dardaarmay in kadib marii ay qaataan waraaqaha maamulanimo ay noqdaan gabdho leh dareen wadaniyadeed iyo mid lahaansho islamarkaana noqda kuwa keena natiijooyin wax ku ool ah oo ay kusoohirtaan gabdhaha kale ee deegaanku.
Sidookale, Agaasinka horumarinta macalimiinta iyo hogaaminta waxbarashada mudane Farxaan Cabdi Makhtal oo dhankiisa kahadlay ayaa sheegay in si fiican oo wadaiyad leh ay usoo dhamaysteen tababarkii sadexda bilood ah ee ay kubaranayeen hogaaminta dugsiyada hoose iyo kuwa sare islamarkaana uu u rajaynayo in sidookale ay kasoobaxaan masuuliyadan loo dhiiibay. Heerka aqoonta waxbarashadoodana ay sii wadaan
Ugudanbayna, wasiirka xafiiska waxbarashada DDSI mudane Ibraahim Aadan Mahad ayaa qalinjabiyayaasha gudooniiyay shahaado sharaf cadaynaysa tababarkan iyo mudadii ay kujireen.